ဒီ ဘလော့ဂ် လေးမှာ ကျွှန်တော် သိထားတဲ့ အနည်းငယ် သော ဗဟု သုတ လေးတွေ ကို ကျွှန်တော့် လို များများ စားစား မသိသူ များ အတွက် သေးငယ်သော အထောက် အပံ့ တစ်ခု ဖြစ်နိုင်လျင် ဖြစ်ကြ စေရန် အတွက် ကျွှန်တော် အလုပ်က အားတဲ့ အချိန်လေး တွေမှာ ရေးသားပြီး ကျွှန်တော် သိထား သလို ရှင်းလင်း တင်ပြ ထားပါကြောင်း...
တစ်ခုခု ကို ရှာချင်ရင် ...
အင်း... အလုပ်မအားလို့ ဘလော့ဖက် မလှည့်ဖြစ်တာ ၆လတောင်ကျော်သွားတယ်... ဒီနေ့တော့ အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ ebook လေးနှစ်ခု Mediafire ကနေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
ISE - Standard Method of Detailing Structural Concrete (June 2006)
Standard Method of Detailing Structural Concrete (August 1989)
အလုပ်မအား.လို့ စာအုပ်ပုံလေးတွေတောင်လုပ်ဖို့ အချိန်မရလို့ပါ...
ရေးသားသူ... နိုးအိမ်ရှင် at 6:59 PM 1 မှတ်ချက်..
3d max9သင်ခန်းစာ ဗီဒီယိုလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အပိုင်း ၁ ကနေ ၈ အထိပါ
အောက်မှာပေးထားတဲ့ သင်ခန်းစာ အပိုင်း-၁ ကနေ သင်ခန်းစာအပိုင်း-၈ ထိ လင့်တွေက အမှားတွေပါ.. အရင်တစ်ခေါက် ကော်ပီရိုက်နဲ့ ညိသွားလို့ ဖိုင်တော်တော် များများ ဖျက်ခံထိသွားလို့ လောလောဆယ် ပုံစံပြောင်းပြီး တင်ထားတာပါ.................
ဟိုးအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ ၁ ကနေ ၈ အထိက ဒေါင်းရမဲ့လင့် အမှန်တွေပါ........
၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈
ရေးသားသူ... နိုးအိမ်ရှင် at 1:50 PM 1 မှတ်ချက်..
Labels: 3ds MAX, Training, Tutorial
Land Desktop မှာ Contour လေး ဆွဲကြည့်မယ်...
ကျွန်တော် ဒီပိုစ့် လေးမှာ Land Desktop မှာဘယ်လို Contour တစ်ခုဆွဲသား ရမယ်ဆိုတာ တစ်ဆင့်စီ ရှင်းပြ ပေးပါ့မယ်။ ရှင်းပြတဲ့နေရာမှာ လွယ်ကူအောင်လို့ အဆင့်တိုင်းကို Screen Shot တွေကို သုံးပြီး တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့်ပြထား တာမို့ ပုံတွေအများကြီးသုံးထားရပါတယ်။ လောလောဆယ် အောက်မှာ ပြထား တာတွေ က Contour တစ်ခုကို ဘယ်လို ဆွဲလို့ရတယ် ဆိုတာ ပြထားပါတယ်။
နောက်တင်မဲ့ ပို့စ်မှာ Contour ကို Cross Section တွေပါ ဖြတ်ပြပါမယ်။ အားလုံး Cross Section တွေပါ ပါမယ်ဆိုရင် Screen Shotက ပုံ ၁၃၀ လောက်ရှိတော့ ဒီပို့စ်တစ်ခုထဲမှာ မတင်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေလို့ပါ.... ဘာမှမရှင်းပြရင်လဲ အဆင့်လိုက်ပုံတွေကို ကြည့်တာနဲ့ နားလည်နိုင်တာမို့ ပုံတွေချည်းပဲ တင်ပေးထားပါတယ်။
Land Desktop ၂၀၀၆ ကို ဖွင့်လိုက်ပါ......
ရေးသားသူ... နိုးအိမ်ရှင် at 10:06 AM3မှတ်ချက်..
ရှာရတာ လွယ်အောင်လို့ တူရာတူရာ တွေကို ခွဲထား တာပါ ....
3d Car Models (1)
AutoCAD 3D (9)
AutoCAD Civil3D (1)
AutoCAD Tips_Tricks (7)
Dynamic Block (7)
How to Download from FileServe (1)
ဟောင်းပေမယ့်လဲ... ကောင်းနေဆဲ ပို့စ်များ...
Standard Method of Detailing Structural Concrete (...
ကျမချစ်သော မြင်ကွင်းများ ( စစ်တွေအလွမ်း) - အပိုင်း(၁) ကျမချစ်သော ကျမချစ်သူ၏ရင်ဘတ်ကို ပင်လယ်ပြင်နှင့် ခိုင်းနှိုင်းရမယ်ဆိုရင်လေ သူရင်ဘတ်က ကျမကြီးပြင်ခဲ့တဲ့ အရပ်ဒေသက ပင်လယ်ပြင်ကဲ့သို့ရိုးစင်းဟောင်...
အပြုံး ပြဿနာ - လမ်းပေါ်မှာ ကောင်မလေးတွေနဲ့ တွေ့လိုက်တယ် ပြုံးပြလိုက်တော့ *သွား* တွေအအေးပတ် ကုန်မယ်နော်တဲ့။ ကျောင်းရောက်တော့ ဆရာမကို ပြုံးပြလိုက်တယ် မင်း အိမ်စာတွေသေချာ လု...
တာရာမင်းဝေနဲ့ ရွှေလက်များ - ရွှေလက်များ လူငယ်စာပေပရဟိတအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်ပြီး ကဗျာဆရာ စာရေးဆရာ တာရာမင်းဝေကွယ်လွန်ခြင်းသုံးနှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကလေးမြို့ ပင်လုံလမ်းမတော်က အောင်မူးဂယ်လ...
သူတို့ဆီ သွား ရအောင်...
The Main Antagonist of Your Organic Gardening Venture (part2of 2) - http://www.bromotravelindo.com If the plants are infested by unnecessary pests, what could be the problem? One root of the problem could be the plants them...
HORIBA: PORTABLE pH METER D-71 | 081322 599149 | JUAL ORP METER - *HORIBA: PORTABLE pH METER D-71 | 081322 599149 | JUAL ORP METER * [image: HORIBA: PORTABLE pH METER D-71 | 081322 599149 | JUAL ORP METER] *Untuk in...
Tall Building Trends and Drivers - Tall building! High-rise building! အထက်မြင့် အဆောက်အဦး။ မြို့ပြ၏ ပြယုဂ်တစ်ခု။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ သင်္ကေတတစ်ခု။ လူသားတစ်ချို့၏ မှတ်တိုင်။ နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးမှု...
ချန်းချန်း ပြောမယ့် Auto CAD
CAD Blogs in English
AutoCAD 2012: GIS/Pipeline People to BreatheaSigh of Relief with Enhanced Raster File Support
Autodesk Inventor LT 2009 - Technology Preview